Nageenya uummataa fi seera | Ramsey County
Yerooo hatattamaa/balaatiif, 911 tti bilbilaa.
Gabaasa hatattamaa kan hin taanef, 651-767-0640 tti bilbilaa.
Waanti shakkitan yoo jiraate, 911 tti bilbilaa.
Wiirtuu Odeeffannoo Hatattamaa
Wiirtuun Odeeffannoo Hatattamaa Bulchiinsa Raamsee giddu gala naannichaa isa baay’ee guddaa yoo ta’u waajjirri poolisoota fi hojjatootta balaa abiddaa dippaartimentiiwwan Bulchiinsa Raamsee keessatti argaman hundumaatti raabsudhaan waggaatti waamicha naannoo miliyeena tokkoo keessumeessa.
Waa’ee haala hatattamaa naannoo jiru akeekkachiisni karaa ergaa gabaabaa, email yookin bilbilaa bakka tokko yookin heddukanneen akka mana jireenyaa yookin bakka hojiitti akka isin qaqqabu yoo barbaaddan galmaa’aa.
Manneen Amala Sirreessaa Hawwaasaa
Manni Amala Sirreessaa Bulchiinsa Raamsee maloota jijjiirama dhuunfa fi itti gaafatamummaa jajjabeessan fayyadamuudhaan hawaasa naga qabeessa fi fayyaalessa uumuf hojjata. Hojjattoonni mana amala sirreessaa Bulchiinsa Raamsee sirreeffamtoota fi namoota yakka hojjatan ilaalchisee bu’uuraalee garaa garaa keessatti nageenya isaanii eeguu, to’achuu, seeran qabuu, gorsuu fi leenjii jireenya isaanii irratti jijjiirama fidu kennuu irratti hojjatu.
Bu’uuraleen kunneen kaneen kanaa gadii dabalatu:
Bu’uuraalee amala sirreessaa (mana/bakka itti hojjatan).
Wiirtuu Amala Sirreessaa Dargaggoota Umuriin Isaanii Hin geenyee.
Biiroo Abbaa Alangaa Bulchiinsichaa
Biiroon Abbaa Alangaa Bulchiinsa Raamsee haqa, nageenya uummataa duuka bu’uudhaan, namoota saaxilamoo ta’an eegudhhaan, tajaajila seeraa qulqullina qabu kennuu fi hawaasa keenyaaf bu’aa qajeelloo ta’e galmaan gahuuf gaggeessummaa dhiyeessudhaan jirattoota Bulchiinsa Raamseetiif tajaajila kenna.
Namoota yakkaaf saaxilmaniif warren dubbatan
Yeroo himanni yakka baname, deeggarsa, odeeffannoo, wantota barbaachisani fi odeeffannoo deggertoonni keenya (namoonni miidhaamtootaf dubbatan) kallattiidhaan namoota miidhamanii fi ragoolee isaanii kallatiidhaan qunnamuudhaan waliin hojjatu. Akkasumas miidhamtoonni mirga isaanii akka beekan ni taasisu.
Mana Barumsaa Hirmaachuun Murteessadha
Barattoonni yeroo heddu mana baruumsaa irra hafan baruumsan duubatti hafuudhaan carraa milkaa’ina gara fuulduraatti qaban jalaa hanqisa. Barattoonni sababa maalitiif mana baruumsaa irraa akka hafanii fi gufuuwwan kanneen furuudhaan, turtii barattoonni mana baruumsaa keessatti qabanii fi jireenya isaanii keessatti akka milkaa’an gochuuf barattoota fi maatii isaanii waliin ni hojjanna.
Biiroo Aangawaa Seera fi Sirnaa
Biiroon Aangawaa Seera fi Sirnaa tajaajilawwan seera kabachiisu fi nageenya uummataa heddu laata. Tajaajiloonni kunneenis eegumsa, qorannoo, karaa bishaani fi tajaailoota hawaaasaa uummata naannoo Bulchiinsa Raamsee jiraatanii fi hojii Mana amala Sirreessaa Gaheessotaa (mana amala sirreessaa of keessatti qabata. Akkasumas dippaartimentichi tajaajilawwan nageenya hawwaasa naannoo (kan akka garee SWAT) ni dhiyeessa; dabalataanis mana murtii aanaatiif eegumsa ni taasisa.
Yeroo ammaa Biiroon Aangawaa Seera fi Sirnaa Arden Hills, Falcon Heights, Little Canada, North Oaks, Shoreview, Vadnais Heights fi White Bear Township dhaaaf akka dippartimentii poolisii naannotti gargaara.
Wiirtuu Mana Amala Sirreessaa Gaheessotaa (hidhaa)
Wiirtuun Amala Sirreessaa Gaheessotaa siree 500 kan qabu ta’ee namoota hanga manni murtii murteessutti yeroo hidhaa isaanii eeggataniif tajaajila naga qabeessa fi mijataa ta’e dhiyeessa. Akkasumas manni amala sirreessichaa namoota yeroo murtii eeggatanii fi wabiidhaan bahuu cabsan ni keessumeessa.
Sa'aatiwwan, kallattiiwwanii fi odeeffannoo dabalataa